linoo-ayar: သာသနာေတာ်ကို ဂုဏ်တင်ေနတာလား၊ ဂုဏ်ချေနတာလား
သာသနာေတာ်ကို ဂုဏ်တင်ေနတာလား၊ ဂုဏ်ချေနတာလား
By သစၥာ | သ​စ္စာ on 1:21 AM ဘာသာေရးနှင့်ပတ်သက်၍
ယခုအခါ ြမန်မာြပည်တွင် သာသနာ့ေဘာင်၀င်ပါက နတ်ြပြကသည်ကို ေတွ့ရပါသည်။ အကုန်လံုး လိုလိုပင် နတ်မြပရင် သာသနာ့ေဘာင်ထဲ မေရာက်၊ မ၀င်ရဟု မှတ်ထင်ေနြက၍ ဤေဆာင်းပါးကို အားလံုးနှင့် အတိုက်အခံလုပ်ကာ ေရးသားလိုက်ရပါသည်။ တကယ်တမ်း စမ်းစစ်ြကည့်ပါလှျင် ရှင်ြပုလှျင် နတ်ြပြကရမည်ဟု ဘုရားရှင်က လမ်းညွှန်ေဟာြကားခဲ့ြခင်း မရိှသည်ကို ေတွ့ရပါ၏။ အဋ္ဌကထာ ဋီကာများတွင်လည်း ြပဆိုထားြခင်း မရိှပါ။ နတ်၀ါဒီများမှ အစြပုလုပ်ကာမှ အစဉ်အလာြဖစ်သွားြခင်းပင် ြဖစ်သည်။ ဘုရားရှင်လက်ထက်တွင် မြပုလုပ်ခဲ့ေသာ နတ်ြပြခင်းအေလ့ကို ပုဂံေခတ်တွင် စတင်ြပုလုပ်သည်ကို ေတွ့ရိှရ၏။ ထိုပုဂံေခတ် နတ်၀ါဒီများက စတန့်ထွင်ြခင်းသာပင် ြဖစ်ေပသည်။
ရှင်ြပုြခင်း အစသည် သားေတာ်ရာဟုလာမှ စတင်ခဲ့ြခင်းြဖစ်၏။ သို့ေသာ် သားေတာ်ရာဟုလာ ရှင်ြပုစဉ်ကလည်း ဘယ်နတ်ကိုမှ မြပပါ။ အရှင်သာရိပုတ္တရာ ရဟန္တာမေထရ်ြမတ်ြကီးရဲ့ညီအငယ်ဆံုး ေရ၀တ ရှင်ြပုစဉ်ကလည်း ဘယ်နတ်ကိုမှ မြပခဲ့သည်ကို ေတွ့ရြပန်သည်။ ရှင်ြပုရာတွင် နတ်ြပရန်လိုအပ်သည်ဟု ဘုရားရှင်က ေဟာြကားေတာ် မူခဲ့ပါသလား၊ ဘုရားရှင်လက်ထက်တွင် နတ်မြပဘဲ ရှင်အြဖစ် ေရာက်ခဲ့သူချည်းပင် ြဖစ်သည်။ ထုိေခတ်က ဗုဒ္ဓဘာသာ၀င်ေတွလည်း ဤသို့ နတ်ြပြခင်းကို မြပုလုပ်ပါ။
မည်သုိ့ေသာ နတ်ကို ြပသနည်းဟု ေမးြကည့် စမ်းစစ်ြကည့်ပါက အမျိုးမျိုး ြဖစ်ေနသည်။ ြမန်မာြပည်အနှံ့ နတ်ြပသူေတွ အများြကီးြဖစ်သည် ။ ထိုနတ်တို့က ကိုယ်ပွား မိတ္တူေတွ ပွားထားတာလား။ ဒါမှမဟုတ် နတ်ကလံုးေတွလား။ တစ်ချို့က မိဆိုင် ဖဆိုင်နတ်ကို ြပသည်၊ အချို့က နယ်ေတာ်ရှင်၊ အချို့က ရွာေတာ်ရှင်၊ အချို့က မိရုိုးဖလာနတ်များကို ြပသည်ဟု အမျိုးမျိုး ြဖစ်ေနသည်။ ဘာသာေရးစာေပ အေတာ်အတန် ေလ့လာဖူးသူေတွကေတာ့ သာသနာေတာ်ေစာင့်နတ်၊ သမ္မာေဒ၀နတ်ေတွကို ြပသြခင်း ြဖစ်သည်ဟု ဆိုြကြပန်သည်။ အယူအဆ အမျိုးမျိုးြဖစ်ေနသည်ကိုိ ေတွ့ရိှရသည်။
အချို့ေသာ လူြကီးများသည် နတ်မြပရင် ကိုရင် မ၀တ်ေကာင်းဘူး၊ နတ်ကိုင်တတ်သည်ဟု ဆိုြကသည်။ မည်သုိ့ေသာ နတ်ေတွက ကိုင်ြကသနည်း၊ ရွာေတာ်ရှင်၊ နယ်ေတာ်ရှင်၊ မိရိုးဖလာနတ်တို့သည် သာသာနာေတာ်သို့သတ်သွင်းသည်ကို ေနှာက်ယှက်ချင်တိုင်း ေနှာက်ယှက်လို့ ရပါ၏ေလာ။ ရှင်ြပုြခင်းသည် ေကာင်းမှုကုသိုလ်ြပုလုပ်ြခင်းြဖစ်သည်။ ကုသိုလ်တွင် စွမ်းရည်ရိှသည်။ တစ်နည်းအားြဖင့် ဓမ္မေရးရာ လုပ်ြခင်း ြဖစ်သည်။ ဓမ္မလုပ်ငန်းကို ယံုယံုြကည်ြကည်ြပုလုပ်လှျင် ကုသိုလ်က ေစာင့်ေရှာက်ပါလိမ့်မည်။ သာသနာေရး ....သာသနာေရးဆိုြပီး လုပ်ေနတာေတွက ဘုရားရှင်နှင့် တပည့်သာ၀ကြကီးများ ေဆာင်ရွက်ေတာ် မမူခဲ့တာေတွကို အဘယ်ေြကာင့် လုပ်ေနြကပါသနည်း။ ရှင်ေလာင်းကို နတ်ြပတာဟာ ဗုဒ္ဓဘာသာ၀င်တို့ရဲ့ လုပ်နည်း လုပ်ဟန်ပါဆိုြပီး ေြပာေနတဲ့သူေတွဟာ ေထရ၀ါဒ ဗုဒ္ဓဓမ္မကို ကြကီးခေခွးေလာက်ေတာင် မသိတဲ့ လူေတွပင် ြဖစ်သည်။ တကယ်ဆိုလှျင် ဗုဒ္ဓဘုရားရှင်လက်ထက်ေတာ်က အစဉ်အလာကို ေထာက်ချင့်ြပီး ရှင်ေလာင်းကို နတ်မြပတာကိုမှ ဗုဒ္ဓဘာသာလို့ ဆိုသင့်ပါသည်။ စာမတတ် ေပမတတ်၊ စာမဖတ် ေပမဖတ်ဘဲ ကိုယ်ထင်ရာကိုယ်ေြပာေနခဲ့ြကတဲ့ သူေတွရဲ့စကားကို တဆင့်စကား တဆင့်မကမ်းြကဖို့ လိုပါသည်။ စာမတတ် ေပမတတ်၊ စာမဖတ် ေပမဖတ်ေတွက ရှင်ေလာင်းကို နတ်ြပတာဟာ ဗုဒ္ဓဘာသာလို့ ေြပာေနြကေသာ်လည်း စာတတ် ေပတတ်၊ စာဖတ် ေပဖတ်တဲ့ ဗုဒ္ဓစာေပပညာရှင် ဓမ္မစရိယ ဦးေအးနိုင်မှ ဤသို့ ေကာက်ချက်ချခဲ့ ပါသည်။ နတ်စင်သွားြပသည့် အယူအစသည် နတ်ကိုးကွယ်မှု တစ်ဖက်စွန်းေရာက်သည့် ေရှးလူြကီးများ တီထွင်သည့် ဓေလ့ပင်ြဖစ်ပါေြကာင်း၊ ေလာကုတ္တရာေရးကို လုပ်တဲ့ေနရာမှာ ဒီနတ်စင်ြပတဲ့ ေလာကီေရး အပုိအလုပ်ေတွကို လံုး၀မလုပ်သင့်ပါေြကာင်း ေကာက်ချက်ချခဲ့သည်။
ေကျးဇူးရှင် ဓမ္မဒူတအရှင်ပညာေဇာတ ဆရာေတာ်ြကီးမှလည်း ဤသို့ မိန့်ြကားခဲ့ပါသည်။ " ရှင်ေလာင်း နတ်ြပတဲ့ ဓေလ့ထံုးစံနဲ့ ပတ်သက်ြပီး၊ ရှင်ေလာင်းနှင့်နတ် ဘယ်သူြမတ်၍ ဘယ်သူက ဘယ်သူ့ကို လာြပီး ဖူးရမှာလဲ၊ သတိြပုြကပါ။ ဗုဒ္ဓဘုရားေလာင်း ေတာထွက်တဲ့အခါ လူမသိဘဲ နတ်ေတွက သိ၍ အကူအညီေပးတာကုိ အထူးသတိြပုြကီး ရှု့ြကည့်ပါ။ နတ်ြပြခင်းသည် ဗုဒ္ဓသာသနာ အစဉ်အလာ မဟုတ်ပါ။ နတ်သမားေတွက ရှင်ေလာင်းကို နတ်ေအာက်ဆွဲသွင်းြခင်းမှျသာပါ။ သာသနာေတာ် ဆုတ်ယုတ်ြခင်း အလုပ်လို့ မှတ်ပါ။ ရှင်ေလာင်းကို ဘယ်ေတာ့မှ နတ်မြပပါနဲ့" ဟု ဆံုးမ ဩ၀ါဒ မိန့်ြကားခဲ့ပါသည်။
သို့ပါ၍ ရှင်ေလာင်းကို နတ်ေအာက် ဆွဲသွင်းေနြခင်းဟာ သာသနာေတာ်ကို ဂုဏ်တင်ေနတာလား၊ ဂုဏ်ချေနတာလား ဟူသည် အသိဉာဏ်ရိှသူတိုင်း စဉ်းစားေ၀ဖန် ဆံုးြဖတ်သင့်ြကေပသည်။
32 Response to 'သာသနာေတာ်ကို ဂုဏ်တင်ေနတာလား၊ ဂုဏ်ချေနတာလား'
http://linoo-ayar.blogspot.com/2008/09/blog-post_25.html?showComment=1222339469827#c416292169499408167'> September 25, 2008 at 3:44 AM
နတ်ြပတယ်ဆိုတာ တကယ်ကို မလိုတဲ့ ကိစ္စပါ။ ဒါဟာ လွှဲမှားေနတဲ့ ထံုးတမ်းတစ်ခုပါ။ ကျွန်ေတာ် ရှင်ြပုတုန်းကလည်း နတ်မြပပါဘူး။ ဒီအတုိင်းပဲ ဆရာေတာ်ဆီမှာ သကင်္န်းေတာင်းြပီး ကိုရင်၀တ်ခဲ့တာပါ ခင်ဗျ။
http://linoo-ayar.blogspot.com/2008/09/blog-post_25.html?showComment=1222347850710#c8545150721364911646'> September 25, 2008 at 6:04 AM
၎င်း နတ်ြပြခင်း ကိစ္စကို အတိအကျ ကန် ့ကွက်ပါတယ် ။
ဘာမှ လံုး၀ မသက်ဆိုင်ပါဘူခင်ဗျာ။အယံုအြကည်လည်းမရှိ
ပါဘူး။ ဆရာေတာ် ဦးေကာသလ ကလည်း ဒီအေြကာင်း
က်ို ေဟာြကားရှင်းလင်းထားတာရှိပါတယ်။ ဂဃနဏ ၇ှင်းလင်း ေ၀မှျတဲ့ အတွက် ကိုလင်းဦးကိုေကျးဇူးပါခင်ဗျ။:)
http://linoo-ayar.blogspot.com/2008/09/blog-post_25.html?showComment=1222353428821#c5969846081895281192'> September 25, 2008 at 7:37 AM
တကယ်ေရးသင့်တဲ့ ပို့စ်ေလးပါ။ ေထရ၀ါဒထဲကို ဟိန္ဒူအယူအဆ၊ တန္တရ မန္တရ၊ ဘိုးေတာ်မယ်ေတာ်၊ မိရိုးဖလာနတ် စတာေတွ ၀င်ပူးေနတာကို အခုေခတ် ကွျန်ေတာ်တို့လူငယ်ေတွက သတိတရားရှိလာြက၊ ထုတ်ေဖာ်ေရးသားလာြကတာ သာသနအတွက် ၀မ်းေြမာက်စရာပါ။ ေထရ၀ါဒဗုဒ္ဒဘာသာ အမည်ခံ ြမန်မာေတွအေနနဲ့ မိမိတို့ ခံယူထားတဲ့ ေထရ၀ါဒနဲ့ လက်ေတွ့ကျင့်သံုးေနကျတဲ့ အမူအကျင့်ေတွဟာ ဘယ်ေလာက် အလှမ်းကွာေနတယ်ဆိုတာ နားလည်လာြကဖို့ အေရးတြကီးလိုအပ်ေနပါတယ်။ ေနာက် ကွျန်ေတာ်တို့ သတိထားစရာတစ်ခုက မဟာယနဗုဒ္ဒဘာသာပါ။ ဒီေန့ေခတ်မှာ မဟာယနေကျာင်းတိုက်ေတွ အင်အားတစ်စတစ်စ ြကီးထွားလာြပီး သက်သက်လွတ်ဗုဒ္ဒသာသနာြပုေကျာင်း ဆိုတဲ့နာမည်မျိုးေတွနဲ့ မဟာယန ကို သွတ်သွင်းဖို့ ြကိုးစားလာတာကိုလဲ သတိြပုမိြကဖို့ လိုပါတယ်။
http://linoo-ayar.blogspot.com/2008/09/blog-post_25.html?showComment=1222355304883#c4735989638645294904'> September 25, 2008 at 8:08 AM
အဋ္ဌကထာ ဋီကာများတွင်လည်း ြပဆိုထားြခင်း မရိှပါ ဆုိလို့ ကိုလင်းဦးက အဌကထာေတွကုိ ေမွှေနှာက်ထားတဲ့သေဘာလားဗျ။ ပိဋကတ်နဲ့အဌကထာ ဘယ်သင်း ပိုမှန်သလဲဟင်။ ထပ်ေမးဦးမယ်။ ကုသုိလ်က လူကို ဘယ်လိုေစာင့်ေရှာက်တာလဲ။ ထပ်ေမးပါမယ်။ ေရှးလူြကီးေတွက အဲဒီနတ်ြပတဲ့ကိစ္စကို အားအားရှိလက်ယားေြပေအာင် ေလှျာက်ေရးြပီး မှတ်တမ်းတင်သွားတာေပါ့ေနာ်။ အဲဒီနတ်ြပြခင်းေနာက်ကွယ်မှာ ဘယ်လို သေဘာတရားေတွရိှလဲလို့ေတွးဖူးသလား။ အဲဒီနတ်ေတွကိုေရာ တကယ်ရှိတယ်လို့ ထင်ေနလို့လားဗျ။ လင်းစမ်းပါဦး ကိုလင်းဦးေလးရယ် အဟက်ဟက်။ ကျေနာ်က စာေရးဆရာမဟုတ်ဘူးေနာ်။ အဟက်ဟက်။ စာေရးဆရာဂုဏ်ပုဒ်နဲ့ လာမယှဉ်ပါနဲ့။ သားသားက လူအန္ဓေလးပါ။ အဟက်ဟက်။
http://linoo-ayar.blogspot.com/2008/09/blog-post_25.html?showComment=1222356617396#c8155472718309986068'> September 25, 2008 at 8:30 AM
ခက်တာဘဲ. ကေဘကမာ က လုပ်ခဲ့တာဘဲ။ ဘယ်နဲ.လုပ် မလဲ
http://linoo-ayar.blogspot.com/2008/09/blog-post_25.html?showComment=1222357023678#c279409640184653702'> September 25, 2008 at 8:37 AM
USER > >ကျွန်ေတာ့်ကို မနာလို မေကျနပ်လို့ ပုဂ္ဂိုလ်ေရးအရ ေစာ်ကားရင် ေစာ်ကားပါ။ ဒါေပမယ့် ဘာသာတရားကို မေစာ်ကားပါနဲ့။ ကျွန်ေတာ့်အေနနဲ့ လံုး၀လက်မခံပါ။ ဒီက မိတ်ေဆွဟာ ဒါဆိုရင် ဗုဒ္ဓဘာသာ စစ်စစ်တစ်ေယာက် မြဖစ်နိုင်ပါဘူး။ မိဘကိုးကွယ်လို့ လိုက်ကိုးကွယ်ေနတဲ့ အဆင့်ပဲရိှေသးတယ်လို့ ေကာက်ချက်ချလို့ရေနပါတယ်။ နတ်ကို ကိုးကွယ်မိရင် ဗုဒ္ဓဘာသာမှာ သရဏဂံုပျက်တယ်ဆိုတာ သိပါသလား။ သရဏဂံုဆိုတာကိုေကာ နားလည်ပါသလား။ သရဏဂံုပျက်ရင် ေထရ၀ါဒ ဗုဒ္ဓဘာသာ၀င် မဟုတ်ေတာ့ဘူး။ လံုး၀ လံုး၀ ဘာသာေရးနဲ့ ပတ်သက်ြပီး မေစာ်ကားပါနဲ့။ ပိဋိကတ်ဆိုလို့ ပိဋကတ်ကို ဖိသတ်ေနတဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်ေတွ အများြကီး ရိှပါတယ်။ (၃၇)မင်းလို အစိမ်းေသ နတ်ေတွကို ကိုးကွယ် ယံုြကည်တယ်ဆိုရင်ေတာ့ ေထရ၀ါဒ ဗုဒ္ဓဘာသာ စစ်စစ် မဟုတ်ပါဘူး။
Myo Win Zaw
http://linoo-ayar.blogspot.com/2008/09/blog-post_25.html?showComment=1222357023679#c8058175534200492325'> September 25, 2008 at 8:37 AM
ေကာင်းတယ်ဗျာ တကယ်လိုအပ်တဲ့ ေ၀ဖန်ချက်ဘဲ ဗုဒ္ဓဘာသာမှာ တလွဲဆံပင်ေကာင်းေနတာအများြကီးဘဲ
http://linoo-ayar.blogspot.com/2008/09/blog-post_25.html?showComment=1222357497055#c4463467050860299471'> September 25, 2008 at 8:44 AM
ကိုလင်းဦး ကွျန်ေတာ်လည်း သရဏဂံုတည်ြခင်းနှင့် သရဏဂံု ပျက်ြခင်းတရားကို နာဘူးတယ်ဗျ။ ဆရာေတာ်
ရဲ့ဘွဲ့ ကိုေတာ့ မမှတ်မိေတာ့ဘူး။ ကွျန်ေတာ်ကေတာ့ ဘုရား၊တရား၊သံဃာ၊မိဘ၊ဆရာဆိုတဲ့ အနေန္တာ အနန္တငါးပါး ကိုဘဲဦးထိပ်ထားပါတယ်။ ဒါကမှလဲ တကယ့်အားကိုးရာအစစ်ေလ။ ဒီပိုစ့်ေလးက တင်သင့်တဲ့ ပိုစ့်ေလးပါဘဲ။
http://linoo-ayar.blogspot.com/2008/09/blog-post_25.html?showComment=1222359343999#c6887250956546773920'> September 25, 2008 at 9:15 AM
ကိုယ့်ရပ်ကိုယ့်ရွာရဲ့ ဓေလ့အယူေတွက အရိုးစွဲေနေလေတာ့ မယူမေကာင်း ယူမေကာင်းလို့သာ ဆိုရေတာ့မှာပဲ။ ကျွန်ေတာ် ကိုရင်ဝတ်တုန်းက ေကျာင်းထိုင်ဆရာေတာ်ြကီးက လံုးဝနတ်မြပခိုင်းပါဘူး။ ဒါေပမယ့် အယူသီးတဲ့ လူြကီးေတွက ရှိေသးေတာ့ ကျွန်ေတာ့်မိဘနှစ်ပါးလည်း မလွန်ဆန်နိုင်ခဲ့ဘူး။ ကျွန်ေတာ်တို့ြမို့ရဲ့ ေမာင်ရှင်ေလာင်း ြမင်ကွင်းတစ်ခုကေတာ့ အဲဒီလုိပါပဲ။
http://linoo-ayar.blogspot.com/2008/09/blog-post_25.html?showComment=1222372730055#c3660156924954153869'> September 25, 2008 at 12:58 PM
နတ်ကုိ မကန်ေတာ့ပါဘူး။ အရုိအေသေတာ့ ဦးြကီး ဦးေလးေတွလုိ သေဘာထားေပးပါတယ်။ ကုိယ်အရွယ်ေရာက်ခင်က ဆုံးပါးသွားတဲ့ လူြကီး သူြကီးေတွလုိေပါ့။ ဗုဒ္ဓဘာသာအစစ်လုိ့ေတာ့ မေကျွးေြကာ်ပါဘူး။ ြဖစ်နိုင်ေအာင်ေတာ့ ြကိုးစား ေနပါတယ်။ ြပတဲ့ နတ်ေတွကလဲ ြမို့ေစာင့်နတ်တုိ့ ရွာေစာင့်နတ်တုိ့ ဆုိေတာ့ ဘုရားကုိဖူးဖုိ့ေတာင် မမီတာ။ ကုိ User ေရ ေရှးလူြကီးေတွ ေရးထားတယ် ဆုိတဲ့ ရှင်ေလာင်းနတ်ြပ သမုိင်းေလးရှိရင် ဖတ်ချင်ပါတယ် ခင်ဗျ။ ေနာက် နတ်ြပတဲ့ ေနာက်ကွယ်က သေဘာထားေလးလဲ သိချင်ပါတယ်ဗျာ။ အကုိ့ blog မှာများ ေရးထား ေသးလား။ ကျွန်ေတာ် အကုိ Link ကုိ Click လုိ့မရလုိ့ ညွှန်းေပးပါဦး။ နတ်ေတွကလဲ တစ်ကယ် မရှိဘူးဆုိေတာ့ စိတ်ဝင်စားစရာ ေကာင်းေနလုိ့ေလ။ Blog မေရးထားလဲ အညွှန်းေလးပဲ ြဖစ်ြဖစ် Mail ကေနပဲြဖစ်ြဖစ် ပုိ့ေပးေစချင်ပါတယ်။ ကျွန်ေတာ်တုိ့က အုန်းသီး ငှက်ေပျာသီး အစိမ်းေတွနဲ့ ကန်ေတာ့ပွဲတင်တဲ့ ကိစ္စေတွတင် ေတာ်ေတာ်ေလး ေြပာြဖစ်ခဲ့ြကဖူးလုိ့ပါ။
http://linoo-ayar.blogspot.com/2008/09/blog-post_25.html?showComment=1222409803654#c3326766099689085471'> September 25, 2008 at 11:16 PM
အကိုေြပာသွားတာေတွက အေထာက်အထားခိုင်ခိုင်လံုလံုနဲ့ကိုတင်ြပသွားတာ ေထရ၀ါဒမှာ နတ်မရှိဘူး ပုတီးမရှိဘူး ရှင်ဥပဂုတ္တ မေထရ်မရှိဘူး အကိုေရးထားတာ ြကိုက်တယ်ဗျာ
http://linoo-ayar.blogspot.com/2008/09/blog-post_25.html?showComment=1222412410875#c3571494751505391582'> September 26, 2008 at 12:00 AM
ေထရ၀ါဒအယူမှန်များ လူငယ်များအြကားအသိမှန်ြပန့်ပွားေအာင်ြဖန့်ေ၀ေပးတာေကျးဇူးအများြကီးတင်တယ်ဗျာ။ အခုလူငယ်ေတွကေနာင်လူြကီးြဖစ်ြပီး အယူမှန်ေတွကုိေနာက်လူေတွကုိလက်ဆင့်ကမ်းရမှာ
ရဲ့စဉ်းစားေ၀ဖန်ပုိင်းြခားလက်ခံတတ်တဲ့ဉာဏ်ကုိပိတ်ဆုိ့ထားတာ ကျွန်ေတာ်ေတာ့ လက်မခံဘူးဗျ။ ေရှးလူြကီးေတွရဲ့ထုံးစံေတွမှာ အယူမှားေတွအများြကီးရှိပါတယ်ဗျာ။
နတ်နဲ့ပတ်သက်လုိ့ြဖူးဆရာေတာ်ြကီးေဟာြကားေတာ်မူထားတဲ့ေသွးနဲ့ေရးတဲ့သာသနာမှာအေခွ နားေထာင်ြကည့်ဖုိ့ ဟုိေ၀ဖန်ေရးဆရာေလးကုိတုိက်တွန်းလုိက်ပါရေစ။
http://linoo-ayar.blogspot.com/2008/09/blog-post_25.html?showComment=1222415133489#c8898104387446459902'> September 26, 2008 at 12:45 AM
အြမင့်ကေနေအာက်မဆင်းြခင်ရင် အေကာင်းဆုံးက ရတနာသုံးပါးဘဲကိုးကွယ်ဖို့ဘဲ နတ်က်ိုးကွယ်ဖို့ မဟုတ်ဘူး ကိုလင်းဦးတင်ြပတဲ့ အေြကာင်းအရာကို ြကိုဆိုပါတယ်
http://linoo-ayar.blogspot.com/2008/09/blog-post_25.html?showComment=1222426627397#c7687811577479436674'> September 26, 2008 at 3:57 AM
http://linoo-ayar.blogspot.com/2008/09/blog-post_25.html?showComment=1222439964450#c6576966745179997937'> September 26, 2008 at 7:39 AM
နတ်ကို ကိုးကွယ်မိရင် ဗုဒ္ဓဘာသာမှာ သရဏဂံုပျက်တယ်ဆိုတာ သိပါသလား ဆုိတာကေတာ့ စာေလးဘာေလး မဆုိစေလာက်ဖတ်တဲ့သူလည်း သိနုိင်သလို စာေတွနင်းကန်ဖတ်ြပီး စာပိကျမ်းပိေနတဲ့သူေတွလည်း သိပါတယ်။ အလကားေန ကျမ်းချည်းအားကိုးေနရင်လည်း မဟုတ်ေသးဘူးေနာ်။ ေအာ် . နတ်ြပတဲ့ဟာက ေရှးလူြကီးေတွ ပါးစပ်ရာဇဝင်နဲ့ေရးသွားတာပါ။ အလကားေန စာအုပ်ထဲမှာပဲ အသိပညာရှိမယ်လို့ ယူဆရင်ေတာ့ ကျမ်းစာအုပ်ြကီးေတွ လှန်ေလှာြပီး ရှာချင်ရင်ေတာ့ လိုက်ရှာြကေပါ့ေနာ်။ ကျမ်းမဖတ်နဲ့မဟုတ်ပါဘူး။ ကျမ်းကို ဖတ်ြပီးရင် ေဖာက်ထွက်နုိင်ဖို့ပါ။ ကိုလင်းဦးက ကွျန်ေတာ့်ကုိ မနာလိုလို့ ဆုိြပီး သံုးသွားတာ ကျေနာ်နားမလည်ပါဘူး။ ဘာကုိဆုိလိုတာလဲ။ ေသချာသံုးသပ်ြကည့်ရင် ဘေလာ့ေပါ်က ေထရဝါဒသမားစစ်စစ်ဆိုတဲ့ လူေတွဟာ အေဝဖန်မခံရဲတာ၊ ေဝဖန်လိုက်တာနဲ့ ေဆွ့ေဆွ့ခုန်ြကတာေတာ့ ေတွ့ေနရပါတယ်။ စိတ်ပျက်ပါတယ်။
ေအာ်..နတ်ြပရြခင်း ရည်ရွယ်ချက်ကို သိချင်ရင် ဆရာသက်လံုေဆာင်းပါးေတွ စာေတွ နာနာဖတ်ေတွးြကည့်ပါလုိ့ ဆုိပါရေစ။ ြပီးရင် ကိုယ့်အေတွးေခါ်နဲ့သာ ကိုယ်ေတွးြကည့်ပါ သိလာပါလိမ့်မယ်။ စာအုပ်ေဘးချြပီး ကူးချတဲ့ အသိထက် အများြကီးြမင့်ပါတယ်ဗျာ။
http://linoo-ayar.blogspot.com/2008/09/blog-post_25.html?showComment=1222441204904#c7239668326311658997'> September 26, 2008 at 8:00 AM
ကို USER>> အဲ့ဒါကိုေြပာချင်ေနတာ။ ေထရ၀ါဒဗုဒ္ဓဘာသာကို မိှုင်းတိုက်ေနတဲ့ စာအုပ်ေတွကိုသာ ဖတ်ေနရင်ေတာ့ လမ်းလွှဲေနေတာ့မှာေပါ့ဗျာ။ အခုဆိုရင် အဲ့လိုမျိုး ထုတ်ေန၊ေရးေနတဲ့သူေတွ အများြကီးပါ။ ဘာသာေရးမိှု်င်းးတိုက်ခံေနရမှန်း မသိြကဘူး။
http://linoo-ayar.blogspot.com/2008/09/blog-post_25.html?showComment=1222445531393#c1016834825194995324'> September 26, 2008 at 9:12 AM
ကိုယ့်အသိဉာဏ်တံခါးကို ပိတ်ထားတာ ေထရဝါဒတဲ့လားဗျာ အစွဲကင်းဖုိ့ ေဟာေနြပီး ဝါဒစွဲေနတုန်းလား အဟက်ဟက်
http://linoo-ayar.blogspot.com/2008/09/blog-post_25.html?showComment=1222468840536#c6915263617415952684'> September 26, 2008 at 3:40 PM
ကျေနာ်တုိ့နယ်ဘက်မှာလဲ .. အဲဒီအယူြကီးက အခုထိရှိေနတုန်းပဲဗျ။ အများြကီးပဲ နတ်ေတွ။ အားလုံးက အမှားကုိလက်ခံထားြကေတာ့ လူညီ "ဤ" "ကျွဲ" ြဖစ်ေနြကတယ်ဗျာ။
http://linoo-ayar.blogspot.com/2008/09/blog-post_25.html?showComment=1222469944497#c2962478076066452305'> September 26, 2008 at 3:59 PM
ကိုလင်းဦးေရ စစ်မှန်တဲ့ ေထရ၀ါဒ သာသနာေတာ်
ြပန် ့ပွားေရးကို အေထာက်အကူ ြဖစ်ေစပါတယ်။
နတ်ြပတယ်ဆိုတဲ့ အယူအဆကို ကွျန်ေတာ်ကေတာ့
လွဲမှားစွာ ကျင့်သံုးေနတဲ့ အယူအဆ လို ့ြမင်ပါတယ်။
http://linoo-ayar.blogspot.com/2008/09/blog-post_25.html?showComment=1222509489400#c3679102498600581774'> September 27, 2008 at 2:58 AM
ဒီ post ကိုြကိုက်တယ်ဗျာ
http://linoo-ayar.blogspot.com/2008/09/blog-post_25.html?showComment=1222513594655#c7266099411688425847'> September 27, 2008 at 4:06 AM
ေကာင်းတဲ့ အယူအဆပါ။ အများြကီးေကျးဇူးတင်ပါတယ်။ မှတ်သားထားပါ့မယ်။
http://linoo-ayar.blogspot.com/2008/09/blog-post_25.html?showComment=1222514209747#c8568124065519286885'> September 27, 2008 at 4:16 AM
ေရးြပီးမှ ကွန်မန့်ေတွ လိုက်ဖတ်လိုက်လို့။ ဟားဟား၊ ဒီလိုေတွ ေဆွးေနွးလာရင် ကျွန်ေတာ်ကေတာ့ သေဘာကျသဗျ။ အသိေတွတိုးတယ်ကိုး။ ကွန်မန့်နဲ့ မေြပာြကပဲ ပိုစ့်ေလးေတွနဲ့ ေြပာြကရင် ပိုလို့ သင့်ေတာ်မလား ေတွးမိပါတယ်။
အားလုံုး ေသာပရိတ်သတ်များ စိတ်ချမ်းသာ ကိုယ်ကျန်းမာ ရှိပါေစခင်ဗျာ။
http://linoo-ayar.blogspot.com/2008/09/blog-post_25.html?showComment=1222522662096#c6276925453012355024'> September 27, 2008 at 6:37 AM
ပထမေတာ့ ကွန်မန့်ေတွ အများြကီးပဲ။ မေရးေတာ့ဘူးဆိုြပီးေန ေနတာ။ အလားလား။ မိတ်စာ ဒိထိ ေတွကလည်းပါေသးဆိုေတာ့။ ြဖူးဆရာေတာ်နဲ့ ေပးေတွ့ေပးလိုက်ရင် ေကာင်းမလားလို့။
ကိုလင်းဦးေရ.. ေလးစားပါတယ်။ ေကျးဇူးလည်တင်ပါတယ်။
http://linoo-ayar.blogspot.com/2008/09/blog-post_25.html?showComment=1222563607203#c3131111432512975179'> September 27, 2008 at 6:00 PM
>>ကိုရွက်၀ါ>> အခုလို ရှင်းြပေပးတဲ့အတွက် ကျွန်ေတာ် ေကျးဇူးတင်ပါတယ်။ အေနှာက်အယှက် မြဖစ်ပါဘူး။
http://linoo-ayar.blogspot.com/2008/09/blog-post_25.html?showComment=1222617134971#c326717626140831742'> September 28, 2008 at 8:52 AM
ကဲ အားလံုး အားလံုးပဲ တကယ့်ကို ေထရဝါဒစစ်ချင်ပါရဲ့ဆိုရင် ေရွှတိဂံုဘုရားေပါ်ကအပါအဝင် တစ်နိုင်ငံလံုးကေစတီေတွမှာ ရှိတဲ့ြဂိုဟ်တုိင်ေတွကို အင်တုိက်အားတုိက်နဲ့ အရင်ြဖိုချလိုက်ပါဗျာ။ ဘုရားရှင်လက်ထက်ေတာ့ မသိဘူး။ အခု ရဟန်းဘွဲ့ေပးရင်ေတာ့ ေန့နံနဲ့ေပးတာကို ြကည့်ြပီး ေြကာက်စရာ ဂန္ဓာရီပညာရဲ့လက်တံရှည်ပံုကို အ့ံဩမိပါတယ်။ အဲဒါေလးကိုလည်း ဘုန်းဘုန်းေတွကို မသင့်ေတာ်ေြကာင်း သွားေလှျာက်လိုက်ပါဦးဗျာ။ ေနာက်ြပီး ဆရာေတာ်ြကီးေတွ ပရိတ်ေတွဘာေတွ မရွတ်ခင် နတ်ပင့်တာလည်း ထူးတယ်ေနာ် ၃၇မင်းမဟုတ်ဘူးဆိ်ုေပမယ့် နတ်ကိုေချာင်ထိုးလို့မရဘူးမှလား အရပ်ကတုိ့ရဲ့။
သားကေတာ့ နတ်ကို ကိုယ့်ေဘာ်ေဘာ်ေတွလိုပဲ သေဘာထားပါတယ် ရှင်ြပုခါနီးဦးမချေပမယ့် ေဟ့ေကာင် ငါေတာ့ ကုသိုလ်ေလးဘာညာေလးြပုေတာ့မယ် မင်းကိုလာနူတ်ဆက်တာ မင်းလည်း သာဓုေခါ်ရေအာင် ငါေပးတဲ့ အမှျေလးလာယူဦီးကွ ဆိုြပီး သွားေခါ်တာပါ။ အဟက်ဟက်။ ကိုလင်းဦးတုိ့ ကိုရွက်ဝါတုိ့ ေဒါက်တို ဉာဏ်တုိ့ ေကျနပ်ပါေစဗျာ။ မေကျနပ်လည်း သားမတတ်နုိင်ေတာ့ဘူး။ သားကိုပဲ ဝိုင်းဖဲ့ေနြကတာကိုးဗျ။ အဟင့်။ ရက်စက်လိုက်ြကတာ။ ေနာက် မြငင်းေတာ့ဘူးေနာ်။ တုတ်ထမ်းြငင်းရမယ့်ကိန်းဆိုက်ေနမယ်။ ေအးေဆးေအးေဆးေနာ်။
http://linoo-ayar.blogspot.com/2008/09/blog-post_25.html?showComment=1222653873837#c2329278091657930490'> September 28, 2008 at 7:04 PM
အခုလို ရှင်းြပေပးတဲ့ အတွက် ေကျးဇူးပါပဲ။
ကိုယူဇာေရ.. ကျေတာ်သိသေလာက်ကေတာ့ နတ်သိြကားနဲ့ ၃၇မင်းနတ် မေရာေစချင်ပါ။ နတ်သိြကားဆိုတာက ေကာင်းမှုကုသိုလ်ြပုလို့ အထက်နတ်ြပည်ကို ေရာက်သူေတွပါ။ ၃၇မင်းနတ်ဆိုတာက…….ဘယ်လိုေသလို့ နတ်ြဖစ်တယ်ဆို အားလုံးလဲသိပါတယ်။
http://linoo-ayar.blogspot.com/2008/09/blog-post_25.html?showComment=1222669387944#c8196643157039886270'> September 28, 2008 at 11:23 PM
ရင့်ကျက်တဲ့အသိဉာဏ်ရှိတဲ့လူေတာ်လူေကာင်းဆုိတာ အေြကာင်းအရာကုိဘဲေ၀ဖန်ေဆွးေနွးရပါတယ်။ ကုိယ်ေြပာလုိ့မနုိင်တာနဲ့ဘဲ လူကုိမတုိက်ခုိက်ရပါဘူးခင်ဗျား။ မိေကာင်းဖခင်သားသမီးများအားလုံးသိြကမှာပါ။
လုိ့ဆဲွထုတ်လာတာက ပရိတ်ြကီး၊ ေရွှတိဂုံဘုရား၊ ဘုန်းဘုန်းေတွအမည်နာမကိစ္စ၊ ဘယ်လုိမှဆက်စပ်လုိ့
http://linoo-ayar.blogspot.com/2008/09/blog-post_25.html?showComment=1222743288412#c4683732239665593973'> September 29, 2008 at 7:54 PM
ဒါေပမဲ့ ကိုယ့်ထက်၀ါြကီးတဲ့သူေတွကို ေလးစားသမှုြပုတာပါတဲ့...
ညီမေလးအြမင်ကေတာ့ ...နတ်ြပတယ်ဆိုတာ ဒီကေလးေတွရှင်ြပုတယ်ေကာင်းတာမွန်တာလုပ်ြကပါတယ်...သူတို့ြပုသမှျအတွက်လည်း မိဆိုင်ဖဆိုင်နတ်ေတွကို အမှျေပးဖုိ့ ြပီးေတာ့ သူတို့လည်းကိုယ်နဲ့ထပ်တူကုသိုလ်ရဖို့အတွက် သူတို့ကိုအသိေပးတာပါ...လူဘံုမှာ မဟုတ်တဲ့သတ္တ၀ါေတွအတွက် ကုသိုလ်ဆိုတာလူကေပးမှရတဲ့အတွက် လူေတွက အမှျေပးဖို့လိုတယ်လို့ ေြပာြပဖူးပါတယ်..
ညီမေလးေြပာတာများမှားခဲ့ရင်ခွင့်လွှတ်ပါ။ သူတို့မှာမကွျတ်လို့နတ်စိမ်းဘ၀ေရာက်ေနရတာ..ညီမေလးတို့က အမှျေပးြပီးကူညီသင့်တယ်လုိ့ထင်ပါတယ်.. ေရှးလူြကီးေတွလုပ်ခဲ့တာကလည်းအဲသလိုရည်ရွယ်ချက်လို့ထင်ပါတယ်အစ်ကို..ေနာက်ပိုင်းြကမှာ နတ်ကိုင်တယ်ဘာတယ်ေလှျာက်ေြပာြကတာေနမှာပါ....
http://linoo-ayar.blogspot.com/2008/09/blog-post_25.html?showComment=1223716418315#c4246251004938321013'> October 11, 2008 at 2:13 AM
ေသွးထွက်ေအာင် မှန်တဲ့ ေဆာင်းပါးတစ်ပုဒ်ပဲ ကိုလင်းဦးေရ.. အလွဲြကီးလွဲတာေတွထဲက အလွဲတစ်ခုပါပဲ. ဗုဒ္ဓဘာသာ၀င်ေတွ အေလးအနက်စဉ်းစား လုပ်ေဆာင်သင့်တဲ့ အချက်တစ်ခုပါ.
http://linoo-ayar.blogspot.com/2008/09/blog-post_25.html?showComment=1228942719221#c37475887531406905'> December 10, 2008 at 12:58 PM
ကို user အချိန်ရရင် ကာလာမသုတ်ကိုေလ့လာေစချင်ပါတယ်..
၎င်းသုတ္တန်တွင်အချက်(၁၀)ချက်ကုိ အလွယ်တကူလက်ခံယုံြကည်ြခင်းမြပုဘဲ ေခတ္တထားြပီး
(၁)ဆင့်-တစ်ဆင့်စကားေြပာလာေသာ စကားကုိမယုံနဲ ့အုံး
(၂)ေကာ-ေကာလာဟလ စကားကုိလည်း မယုံနဲ ့အုံး
(၃)စာ-စာအုပ်ထဲက ေြပာတုိင်းလည်း မယုံနဲ ့အုံး
(၄)စဉ်-အစဉ်အလာ ဘုိးဘွားစဉ်ဆက် စကားကုိလည်းမယုံနဲ ့အုံး
(၅)ကူး-ဟုိနည်း ဒီနည်း နည်းကူးချြပီးလည်း မယုံနဲ ့အုံး
(၆)ေတွး-အေတွးေကာင်းတုိင်းမှန်တယ်ဆုိြပီးလည်း မယုံနဲ ့အုံး
(၇)ဆင်-ယုတ္တိများနဲ ့ဆင်ေြခေပးတုိင်းလည်း မယံုနဲ ့အုံး
(၈)ငါ့-ငါ့အယူဝါဒသာမှန်တယ်ဆုိြပီးလည်း မယုံနဲ ့အုံး
(၉)ေလး-ေလးစားြကည်ညုိ ထုိက်ေသာသူ ေြပာတုိင်းလည်းမယံုနဲ ့အုံး
(၁၀)ရာ-ငါ့ဆရာေြပာတုိင်းလည်း အားလုံးမှန်ြပီလုိ ့မယုံနဲ ့အုံး
မည်သည့်အယူဝါဒြဖစ်ေစ ကုိယ်တုိင်သာလှျင်သိေအာင်လုပ်ြကြပီး ကုိယ်တုိင်
လက်ေတွ ့လုပ်ြကည့်လှျင်မှား/မှန် ၊ ဆုိး/ေကာင်းကုိ ကုိယ်တုိင်သိြမင်ြပီးမှ
(တစ်ခဏြဖစ်ရ လူ ့ဘဝအနှစ်ြပည့်ေအာင်ြကိုးစားြက စာအုပ်မှ)
http://sakarwarmyay.blogspot.com မှ ကူးယူေဖာ်ြပထားြခင်းြဖစ်ပါသည်။
user ေြပာတဲ့ ဂန္ဓာရီဆိုတာ ေဗဒင်တို့ ယြတာတို့ကိုေြပာတာထင်ပါ့
ဘုရားစင်စစ် ြဖစ်မယ်လို့ေဟာတာ ေဗဒင်ပညာပါ
ဒီပညာေတွက ဗုဒ္ဓ မပွင့်ခင်ကတည်းက ရိှေနတာပါ ..
မှန်ပါလိမ့်မယ် ေရှ့ြဖစ်ေဟာတာတို့ဘာတို့ ..
ဒါေပမယ့် ဒီပညာေတွကိုေလ့လာ လိုက်စားလို့ တဖက်ကမ်းခတ်ချင်ခတ်သွားပါလိမ့်မယ်.. သံသရာကလွတ်ေြမာက်ရာလမ်းေတာ့မဟုတ်ပါဘူး... တကယ်လို့သာဒီပညာေတွဟာ သတ္တ၀ါေတွ ကိုအကျိုးရိှေစတယ်ဆိုတာမှန်ခဲ့ရင် သတ္တ၀ါေတွအေပါ်မှာဂရုဏာထားတဲ့ ဘုရားရှင်က ေလကုန်ခံြပီး တရားေဟာခဲ့မှာမဟုတ်ပါဘူး..ဒီပညာေတွပဲသင်လိုက်ြကကွာ ..ဆိုတာေလာက်ေြပာလိုက်ြပီးေရာ ..ဟုတ်ဖူးလား ကျွန်ေတာ်တို့နိုင်ငံမှာေဗဒင်ဆရာ နတ်ကေတာ် သိန်းသန်းချီြပီးရိှတာမှန်ပါတယ်.. ဒါဘာြဖစ်လို့လည်း .. user တို့လိုလူေတွအများြကီးရိှလို့ေပါ့ .. ကိုးကွယ်ချင်သပဆိုလည်းကိုးကွယ်ပါ လွတ်လပ်ခွင့်အြပည့်ရိှပါတယ်.. ေထရ၀ါဒဗုဒ္ဓဘာသာကိုကိုးကွယ်တယ်ဆိုရင်ေတာ့ ဒါမျိုးဟုိလိုလို ဒီလိုလိုလာမလုပ်ပါနဲ့ အားလံုက ခင်ဗျားလိုလူေတွ ေတာ့မဟုတ်ြကပါဘူး.
ခင်ဗျားအထင်ြကီးတဲ့ ဂန္ဓာရီ ေဗဒင်ပညာရှင်ေတွ ေပါင်းြပီး နာဂစ်စ် မုန်တိုင်းမလာေအာင် ယြတာေချ ေပးနုိင်ခဲ့ရင်ေကာင်းမယ်ဗျ..
မေသေအာင် ဘယ်နတ်မှ မတတ်နိုင်သလို
ေသရင် ေကာင်းရာေရာက်ေအာင် ဘယ်ေဗဒင်ဆရာမှ ယြတာေချေပးလို့မရဘူး...
user က ဗုဒ္ဓဘာသာ၀င်လို့ယူဆလို့ဆက်ေြပာပါဦးမယ်
သရဏဂံု တည်တဲ့လူ ကိုဗုဒ္ဓဘာသာ၀င်ေခါ်တာေပါ့
ဗုဒ္ဓ ဘုရားရှင်အား ကိုးကွယ်ရာအြဖစ် ဆည်းကပ်ပါ၏
တရားေတာ်ြမတ် ကို ကိုးကွယ်ရာအြဖစ် ဆည်းကပ်ပါ၏
သံဃာေတာ်ြမတ်ကို ကိုးကွယ်ရာအြဖစ် ဆည်းကပ်ပါ၏ တဲ့ဗျ
ဒီ ၃ ခုကို ကိုးကွယ်တာ ဘာလို့ကိုးကွယ်တာလဲဆိုေတာ့
သံသရာ ဆင်းရဲကေနလွတ် ေြမာက်ေအာင် သင်ြပေပးတဲ့ အတွက်
ဗုဒ္ဓ ကို ဆရာအြဖစ် ကိုးကွယ်ပါတယ်
ှဓမ္မ ကိုေတာ့ သံသရာက လွတ်ေြမာက်ရာ လမ်းြပေြမပံု အြဖစ် ကိုးကွယ်ပါတယ်
သံဃာကို ေတာ့ ဒီ လမ်းြပေြမပံုနဲ့ တူတဲ့ တရားကို ထိ်မ်းသိမ်းေစာင့်ေရှာက်ြဖန်ေ၀ ေပးလို့ ကိုးကွယ်တာပါ ခင်ဗျာ
ဒီ ၃ခုကို ကိုးကွယ်ရာမှတ်တဲ့လူကို သရဏဂံု တည်တဲ့လူ ..ဗုဒ္ဓဘာသာ၀င်လို့ေခါ်ပါတယ်
သရဏဂံုပျက်တာ အေြခအေန နှစ်မျိုးမှာ ပျက်ပါတယ်
၁။ ေသရင် သရဏဂံု ပျက်ပါတယ်
၂။ ဒီ၃ ခုမှအပ အြခားအရာတစ်ခုခု ကို ကိုးကွယ်ရာအြဖစ် ဆည်းကပ်တယ် ..ဆိုရင်သရဏဂံုပျက်ပါတယ်
သရဏဂံုပျက်တဲ့လူကို ဘာနာမည်ပဲေပးေပး ..ဗုဒ္ဓဘာသာ၀င်မဟုတ်ပါဘူး
ြမန်မာြပည်မှာ ေြပာေနကျ နတ်ကိုကိုးကွယ်တာမဟုတ်ပါဘူး အရိုအေသေပးတာ ပါ ဆိုတဲ့စကားရိှပါတယ် ...ေြပာချင်သလိုေြပာပါ
လွတ်လပ်စွာကိုးကွယ်ခွင့် ရိှပါတယ်.. ကိုးကွယ်ြကပါ ဒါေပမယ့်
ကို user ေဆွးေနွးချင်ေသးသပ ဆိုရင် nsnsing@gmail.com ကိုအချိန်မေရွးဆက်သွယ်ပါ..
ခုအစ်ကို လင်းဦး ဘေလာ့ဂ်မှာ ဆိုေတာ့ အားနာလို့
ခုလိုေဆွးေနွးေပးတာ ေကျးဇူးပါ user
http://linoo-ayar.blogspot.com/2008/09/blog-post_25.html?showComment=1229658660661#c3318460934461385321'> December 18, 2008 at 7:51 PM
ကိုလင်းဦး အရှင်ဧသိက ေရးတဲ့ ေထရ၀ါဒဗုဒ္ဓဘာသာ ဆိုတဲ့စာအုပ်က နတ်ေတွနဲ့ ပတ်သက်ြပီး ြပင်းြပင်းထန်ထန် ေ၀ဖန်ထားပါတယ်။ အရမ်းေကာင်းတယ်။ ရှာလို့ရရင် ဖတ်ြကည့်သင့်တယ်လို့ထင်တယ်။
http://linoo-ayar.blogspot.com/2008/09/blog-post_25.html?showComment=1250332884331#c3632282184141881112'> August 15, 2009 at 3:41 AM
user ဆုိတဲ့ သူရဲ့ comment ေတွကုိက သေရာ်သလုိလုိ အဆင့်မရှိဘူးေတွ့ရတယ်.အဲလုိပဲ တည့်တည့် ေြပာချလုိက်ေတာ့မယ်. မခံနူိင်ရင်လည်းေနဗျာ.ကုိလင်းဦးေြပာတာမှန်ပါတယ်..
(၃၇)မင်းနတ်ေတွဟာ ေထရ၀ါဒမှာမပါပါဘူးဆုိတာကုိ တတ်သိတဲ့ဆရာေတာ်ေတွက ေသေသချာချာေြပာထားပါရက်နဲ့ အကွန့်တက်ချင်ေသးတယ်..ကုိကေရာ ဘာေတွများေလ့လာထားလုိ့ သူများေြပာတာကုိ သေ၇ာ်ေနေသးလဲ အဲဒါလဲ အ၀ိဇ္ဇာပါပဲ
ေထရ၀ါဒမှာ မပါတဲ့ဟာကုိ ကုိးကွယ်ရင် ေထရ၀ါဒမဟုတ်ပါဘူး.ဒါရှင်ရှင်းေလးရယ်.
တကယ်တမ်း သာသနာက်ုိေစာ်ကားေနတဲ့သူေတွဟာ ဘယ်လုိလူမျုိးလဲဆုိေတာ့ ဘုရားစကားနားမေထာင်တဲ့သူေတွပဲ..
အဲလုိ လုိက်မနာတဲ့ သူထဲမှာ user ဆိုတဲ့သူ မပါေအာင်ေနပါ.အဲဒါ အြကံေပးလုိက်တာ
ကုိuser ခင်ဗျား တရားေတွ နာလုိက်ဦး..